China PVC Kunze Kwemadziro Siding Kuvhara Tambo yekugadzira uye Fekitori | Marlene
PVC Kunze Kwemadziro Yakarembera Bhodhi
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kuvhara tambo
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kuvhara tambo inoshandiswa kugadzirisa kumucheto kwebhodhi rekupedzisira rakarembera kumusoro, kazhinji pasi peves uye pasi pevharo rehwindo.
PVC Kunze Kwemadziro Siding Yakarembera Bhodhi
Chigadzirwa PVC Kuvhara Strip
Saizi 4m * 48mm
Ruvara Yakachena, Yero, Grey .... yakagadziriswa.
Kushanda Kunze Kwemadziro Kushongedza
Zvakanakira PVC Kunze Kwemadziro Siding Kuvhara tambo
1. Hwakasimba kuomarara, kupikisa kwembambo uye kwekunze kusagadzikana kusagadzikana. Inogona kutemwa zvisina tsarukano zvichienderana neinjiniya dhizaini uye dhizaini yekuita, kukotama uye kuchinja chimiro, hakuzove kupwanya, kusiri nyore kukwenya, uye kusagadzikana Acid-base ngura uye mvura mhute ngura, yakaderera thermal conductivity, yekuzvidzima murazvo unodzora ku B1 level chiyero, inogona kunyatso kunonoka kupararira kwemoto.
2. Anti-kuchembera ndiyo yakasarudzika pfuma yePVC. Inowedzerwa neanti-ultraviolet stabilizer kuti uwane anti-kukwegura kushanda. Uye zvakare, ine yakasimba mamiriro ekunze kusagadzikana. Haisi brittle pa -40oC kusvika 70oC, uye ruvara rwuchiri rwakanaka.
3. Hupenyu hwebasa: Hupenyu hwebasa hunosvika pamakore makumi matatu. Chigadzirwa hachina kusvibiswa uye chinogona kushandiswazve. Iyo yakanaka nharaunda-inoshamwaridzika yekushongedza zvinhu.
4. Kuita kwakanaka kwemoto: Chigadzirwa chine okisijeni index ye40, murazvo unodzora uye kuzvidzimisa kure nemoto
5. Kuisa nekukurumidza: Iyo yakarembera bhodhi iri nyore kuisa nekuda kwehuremu hwayo uye nekukurumidza kuvaka. Kukanganisa kusarura, zvinongoda kutsiva bhodhi idzva rakarembera, yakapusa uye inokurumidza.
6.Kuchengetedza magetsi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza: Iyo polystyrene yekumisikidza dura inogona kuiswa pane yemukati mambure ebhodhi rakarembera zvakanyanya, kuitira kuti iro rekunze rekudzivirira kwemadziro riite zvirinani. Imba inodziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha, inova inoponesa simba zvakanyanya. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswazve uye kushandiswazve mukati memakore makumi mashanu uye chine kuita kwakanyanya kwezvakatipoteredza.
7. Kuchengetedza kwakanaka: Ichi chigadzirwa chiri nyore kuisa uye kuchenesa, isina mvura uye hunyoro-chiratidzo.
Pashure: PVC Kunze Kwemadziro Siding Kutanga Bar
Zvadaro: PVC Kunze Kwemadziro Kutsigira J Strip
Exterior Wall Chivakwa
Kunze Kwemadziro Kushongedza Chinyorwa
PVC Yakarembera Board
Pvc Plastiki Mbiri
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kutanga Bar
PVC Stair Handrails Yakachena Ruvara pasina Kudhinda
Inowedzerwa Trellis Fence
PVC Kunze Kwemadziro Kutsigira Mashizha Plate
PVC Kunze Kwemadziro Siding Kubatanidza bar